Paika folo hitazonana ny fitondrana jadona
2010-07-06 @ 01:31 in Politika
Maromaro ihany ireo variana fa tsy dia nahasoratra loatra ny tena. Misy ny olana manokana saingy etsy ankilan'izany mbola anatin'ny mondial ihany koa isika. Ny tena rahateo mpankafy io baolina fandaka io. Efa teo ampamolavolana ny lahatsoratra indrindra aho no nahita, na nanitsy no marina kokoa ity lahatsoratra iray avy any ivelany mitondra ny lohateny hoe "Fomba folo hitantanana repoblika fôpla" ity (tsindrio ny rohy) . Tena nahavariana ny namaky ilay lahatsoratra ka ampitaiko aminareo aloha sady itarafanareo ny zavamisy eto Madagasikara ihany koa. Samia mamoaka ny heviny ary e! Ho an'ireo izay manana fahaizana ny teny anglisy niaviany dia iangaviana an-tanandroa hanitsy ihany koa satria fifanabeazana sy fifanoroan-dalana ny antsika. Mazotoa mamaky azy ary aloha!